DHAGEYSO:Madaxweynaha Soomaaliland oo Salaad Roob doon ah ka qaybgalay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Madaxweynaha Soomaaliland oo Salaad Roob doon ah ka qaybgalay
DHAGEYSO:Madaxweynaha Soomaaliland oo Salaad Roob doon ah ka qaybgalay
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa bulshada ku nool magaalada Hargeysa kala qaybgalay salaad roob-doon ah oo shalay la iclaamiyey, maantana la oogay.
Wasiirka Diin iyo Awqaafta Soomaaliland, Sheekh Cabdirisaaq Xuseen Cali Albaani, ayaa bulshada u jeediyey khudbad dheer oo ku saabsan iscafinta, Alle bariga iyo midaynta quluubta bulshada, wuxuuna ku baaqay inay maalmaha Khayrka leh ee bisha Ramadaan ku camiraan baryada ALLE, gaar ahaan weydiisashada raxmaadka oo waqtigan dad iyo duunyoba baahi weyn loo qabo.
Wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta Soomaaliland Sheekh Maxamuud Suufi Muxumed, ayaa isaguna umada ugu duceeyey inuu Eebbe abaaraha ka dul-qaado, isagoo shacabkana ugu baaqay inay toobad-keenka badiyaan.
Degaannada Soomaaliland ayaa waxaa xilligaan kajira abaar aad u daran taa oo saameysay dad iyo duunyo, waxana dhowr jeer Madaxda Soomaaliland ay ku baaqeen in dadka tabaalaysan loo gurmado.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Mudug
Next articleDHAGEYSO:Madaxweynaha dalka oo mas’uuliyiinta ku hogaamiyay daawashada Meydka Mwai Kibaki